January 2013 ~ ဇင်ကို(နည်းပညာ)
10:28:00 am ဖုန်း No comments
ဖုန်းသုံးနေတဲ့ သူတွေအတွက်ပေါ့အားကုန်နေတဲ့ အချိန်မှာ အားသွင်းဖို့အခက်အခဲရှိရင်လေ
အင်တာနတ်ထဲကရတဲ့ သတင်းလေးပါအားကုန်နေတဲ့ ဘက်ထရီကိုထုတ်လိုက်ပါ
ပြီးရင်ဆေးလိပ်ဘူးခွံ့ မှာပါတဲ့ငွေရောင်စက္ကူနဲ့ ပတ်လိုက်ပါနေရာမလွတ်စေနဲ့ နော်ပြီးရင်
၂ မိနစ်လောက်မီးအပူပေးလိုက်ပါနေရာအနှံ့ကိုပေါ့ပြီးရင်၁၀ မိနစ်လောက် အအေးခံထား ပြီးပြန်သုံးရင်အရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှ တွေအတွအတွက်ဘက်ထရီအားဟာအဆင်သင့်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ ရပါလိမ်မယ်အားရဲ့ ၅ ပုံ ၂ ပုံဟာပြန်ပြည့်နေတာကိုတွေ့ ရမှာပါ .
Nokia ဖုန်းအတွက် အသုံးဝင် လျှို့ ဝှက် ကုဒ်နံပါတ်များ
*#62209526# - Display the MAC address of the WLAN adapter. WLAN support သောဖုန်းများတွင်သာ ရသည်။
အရေးပေါ် အခြေအနေမှာ ဘက်ထရီကလည်း အားကုန်နေပြီဆိုရင် "*3370#" ကုဒ်ကို ရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ပြန်လည် မြင့်တက် ပါတယ်။
#3370# Deactivate Enhanced Full Rate Codec( EFR) ဆိုရင်တော့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းပြန်ပြည့်ပြီး Sound quality ကအစ ပြန်တက်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် Talk time ကတော့ ၅ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျသွားပါမယ်။
ဒါကတော့ လိုင်းဆွဲအားပိုတက်စေပြီး GPRS တို့ service တက်တာတို့ လုပ်ပေးပါတယ်။ သို့ပေမ့် ဘက်ထရီအား ကုန်တာ မြန်ပါတယ်။
ဖုန်း အလိုအလောက် restart ပြန်လုပ်ပါမယ်။ ဘက်ထရီ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း တက်ပေမယ့် လိုင်းဆွဲအား နည်းနည်းကျသွားပါမယ်။
Unlock service provider: sim, turn phone on and press vol up(arrow keys) for3seconds, should say pin code. Press C,then press * message should flash, press * again and 04*pin*pin*pin#
*#62# Allows you to check the number that "Divert If Unreachable(no service)" calls are diverted to
*#746025625# Displays the SIM Clock status, if your phone supports this power saving feature "SIM Clock Stop Allowed", standby time ပိုရစေပါတယ်။
အချို့ ကုဒ်နံပါတ်များကို သတိထား အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါတယ်။
10:23:00 am ဖုန်း No comments